I-Huayi International Industry Group Limited (i-Huayi Group) eyasekwa ngo-1988 eHongKong, yaza yasungula umzi-mveliso wokuqala e-Shenzhen ngo-1990. Kule minyaka ingama-30 idlulileyo siye samisa ngaphezulu kweefektri ezi-6 kwilizwe lase China: Huayi Precision Spring (Shenzhen) Co., Ltd., Huateng Metal Products (Dongguan) Co., Ltd., Huayi Storage Equipment (Nanjing) Co., Ltd., Huayi Precision Mold (Ningbo) Co., Ltd., Huayi Steel Tube (Jiangyin) Co., Ltd. , kunye neHuayi Semi Trailer & Truck (Hubei) Co, Ltd. Sinezinye iiofisi zamasebe eDalian, Zhengzhou, Chongqing, njl. Iinkonzo ezigqwesileyo kubathengi bethu abahloniphekileyo.
| Oko sikwenzayo
Senza iintlobo ezahlukeneyo ze-Grinders, i-CNC lathe machining parts, i-CNC iindawo zokugaya, i-Metal stamping parts, i-Springs, i-Wire forming parts kunye nokunye. Imizi-mveliso yethu iqinisekisiwe nge-ISO9001, ISO14001 kunye ne-ISO / TS16949. Ngo-2006, iQela lethu lazisa ngenkqubo yolawulo lokuthotyelwa kwemeko-bume ye-RoHS, neyaphumelela ekuqapheleni kubathengi.
Ngabachwephesha abanezakhono, ubuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo zangoku zokuvelisa ezivela eJapan, eJamani naseTaiwan, siqhubeke siphucula iinkqubo zethu zemveliso kunye neenkqubo zeQC kule minyaka ingama-30 idlulileyo.
Kude kube ngo-2021, iqela lethu liqhayisa ngaphezu kweeseti ezili-1 000 zoomatshini kunye nabasebenzi abangama-3,000. Iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezipheleleyo emva kokuthengisa ziphumelele igama eliphezulu phakathi kwabathengi kwihlabathi liphela, kunye neemveliso zethu ezithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-60 eMntla nase Mzantsi Melika, eYurophu, eAsia, kuMbindi Mpuma, eAustralasia nangaphezulu.
| Kutheni ukhetha thina |
Isixhobo seMveliso ye-Hi-Tech
Izixhobo zethu eziphambili zokuvelisa zingeniswa ngokuthe ngqo eJamani naseJapan.
Iqela leR & D elomeleleyo.
Sineenjineli ezili-15 kwiziko lethu le-R & D, kwaye uninzi lwazo lunamava angaphezu kweminyaka eli-10.
Uvavanyo lwezinto ezingenayo.
Kwinkqubo yoVavanyo (Rhoqo ngeyure e-1).
Uvavanyo lwe-100% ngaphambi kokuthunyelwa.
Inkonzo enye yokumisa i-OEM / i-ODM, ubungakanani obulungelelanisiweyo kunye neemilo ziyafumaneka. Isisombululo semveliso, ukupakisha isisombululo, ukuhambisa isisombululo, ukuphendula ngokukhawuleza. Iqela lokuthengisa lobungcali libonelela ngolwazi lobungcali kunye neemveliso kuwe. Wamkelekile ukwabelana ngombono wakho nathi, kwaye masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
Amava oshishino atyebileyo
Ngamava angaphezu kweminyaka engama-20, sisebenza kuphando, kuphuhliso, kwimveliso, kwintengiso kunye nakwinkonzo ye-CNC Lathe Machining kunye ne-CNC yokuGaya iinxalenye, i-Metal Stamping Parts, i-Springs kunye ne-Wire Forming Products, ezisetyenziswa kakhulu kwiiMoto, oomatshini, i-Elektroniki Iimveliso, unxibelelwano, izixhobo zonyango, i-UAV kunye nolwakhiwo, njl.
Ngabachwephesha abanezakhono, ubuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo zokuvelisa zale mihla, kubandakanya ngaphezulu kwe-40 ye-CNC Lathes, i-15 ye-CNC ye-Milling Machines, oomatshini aba-3 be-Wire-Cutting, i-2 Sandblasting Machines, i-1 Laser Machine Machine, i-1 ye-Line-Line Machine, i-1 Knurling Machine, i-1 High- Gloss Gqiba umatshini, 16 Ukubetha oomatshini, njl Thina abanezakhono ekuveliseni iindawo machining ngqo eliphezulu kunye entanjeni ezahlukeneyo, ezifana CD texture, eliphezulu-isilungiseleli seglosi, hairline, knurling, anodizing, electroplating, nokukrola, e-ukutyabeka, ngasekhohlo , kwaye nangokunjalo. Sidibana kwaye sisebenzisana kakuhle nabathengi abangaphezulu kwama-380 abavela kwimithombo yeHlabathi kunye neAlibaba. Ngokunyanisekileyo. Ngokukodwa nangobungcali bepliti kusinceda ukuba sikhuphe ukuthembela kwakho kwaye sisebenze ngokulula.
I-CNC ye-Lathe Machining Workshop
Indawo yokuSebenza ye-CNC
Indawo yocweyo ye-EDM
I-Workshop yoLuhlu oluzenzekelayo ngokupheleleyo